आज फेरी कोरोना संक्रमितभन्दा निको हुने बढी, कति जनाको भयो मृत्यु ? — Imandarmedia.com
आज फेरी कोरोना संक्रमितभन्दा निको हुने बढी, कति जनाको भयो मृत्यु ?
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ७४९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट ५ हजार २९३ जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र २४ घण्टामा विवरण प्राप्त भएकाहरु गरी जम्मा ५९ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो ।